Facts – My Life Magazine
Facts & FiguresJanuary 7, 2020
ह्वेल र डल्फिन कसरी सुत्छन् ? व्हेल र डल्फिन पनि हामी मानिसजस्तै स्तनपायी जनावर हुन् । त्यही भएर तिनीहरुको विभिन्न कुराहरु हामीसँग मिल्दाजुल्दा छन् । तिनीहरुको हाडको बनावट पनि हाम्रो जस्तो नै हुन्छ । त्यसको…
सवारी दुर्घटनामा हरेक दिन सात जनाको मुत्यु
Facts & FiguresNovember 7, 2019
सवारी दुर्घटनाका कारण हरेक दिन सात जनाको अकालमा नै ज्यान जाने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । गएको पाँच वर्षमा सवारी दुर्घटनामा परी करिब १२ हजार यात्रुको अकालमा नै मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाएको हो । आर्थिक…
लामखुट्टेले पनि शिकार छान्छ ! महिलाको रगत बढी…
FactsOctober 3, 2019
५० मिटर परबाटै गन्ध थाहा पाउने र शिकारको लागि ४० माइल परसम्म उड्ने अद्भूत क्षमता हुन्छ लामखुट्टेमा ! एक पटक म र मेरा केही साथीहरु खाजा खान होटेल गयौं । समय त्यस्तै दिनको ३ बजेतिरको…
युद्धबाट भन्दा लामखुट्टेको टोकाईबाट धेरै मानिसको मृत्यु हन्छ
Facts & FiguresSeptember 11, 2019
एजेन्सी। हामीलाई सबैभन्दा धेरै खतरा कुन जीवबाट छ भन्दा झट्ट सर्प,बाघ,हात्ती,गैडाआदि दिमाग स्मरण हुन्छ । तर हामी लामखुट्टेको बारेमा विरलै सोच्ने गरेका छौ । मानिस मृत्युको एउटा कारण लामखुट्टेको टोकाई पनि हो । संसारमा युद्व भन्दा…
Facts & FiguresAugust 12, 2019
ब्रम्हाण्डको अन्तिम चरणमा मात्रै पृथ्वीको जन्म हाम्रो सामान्य आँखा र बुद्धिले हेर्दा ब्रह्माण्ड शताब्दियौंदेखि जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ । ब्रह्माण्ड मात्र किन ? सामान्य बुद्धि र आँखाको आँकलनअनुसार त पृथ्वी पनि स्थिर रहेकै दृष्टिगोचर हुन्छ ।…
रक्सी पिउनेलाई बढी टोक्छ लामखुट्टेले
Facts & FiguresMarch 19, 2019
मदिरा पिउनेहरुलाई लामखुट्टेले बढी टोक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकाको जर्नल अफ मस्किवटो कन्ट्रोल एसोसिएशनको रिपोर्टका अनुसार रक्सी नपिउनेहरुभन्दा पिउनेहरुलाई लामखुट्टेले बढी टोक्छन् । यद्यपि रक्सी पिउनेहरुप्रति नै लामखुट्टे बढी आकर्षित किन हुन्छन् भन्ने…
अण्डा मांसाहारी कि शाकाहारी ? यस्तो छ वास्तविकता
Facts & FiguresMarch 10, 2019
धेरैजसो मानिसहरु अण्डालाई मांसाहारी आहार मान्छन् । तर यस्ता कैयौं तथ्य छन् जो अण्डालाई मांसाहारी आहार मान्दैनन् । मासु खाने मानिसलाई आम रुपमा मांसाहारी भनिन्छ । यदि हामी यो परिभाषालाई मान्छौं भने अण्डा निश्चित रुपमा…
विदेशीले नेपाल घुम्दा १५ अर्व खर्च गरे, नेपालीले…
FactsNovember 28, 2018
पछिल्लो तीन महिनामा विदेशी पर्यटकले नेपालमा गरेको खर्च र नेपालीले विदेशमा गरेको खर्चले पर्यटनको नयाँ तस्वीर देखाएको छ। विदेशीले नेपालमाभन्दा हामी विदेशमा घुम्न जादा धेरै खर्च गर्छौ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याकं अनुसार साउनदेखि असोजसम्म…
विश्वमा सबैभन्दा धेरै रक्सी कुन देशका मानिसहरुले पिउँछन्…
FactsSeptember 20, 2018
विश्वमा सबैभन्दा धेरै रक्सी कुन देशका मानिसहरुले पिउँछन् ? यो अत्याधिक चासोको विषय हो । नेपालीहरु कहिलेकाँही सम्झिन्छन् नेपालबाहेक अन्य कुनै त्यस्तो राष्ट्रहरु छैन जहाँ बढी रक्सी खान्छन् । तर हेलो ट्राभलले गरेको एक अध्ययनले…
कहाँ बन्यो आइसक्रिम ? यस्तो छ आइसक्रिमको कथा
FactsAugust 8, 2018
गर्मीको यो मौसममा आइसक्रिमको कुरा गर्दा जिउ नै हुरुक्क हुन्छ । हामीले निकै मिठो मानीमानी खाने यो आइसक्रिम सबैभन्दा पहिले कुन देशमा बनाइयो होला, तपाइँलाई थाहा छ ? तपाइँ हामीमध्ये सायद धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ कि…